20160824 - BSoc Hunt MC (hrb) - nwherald
20160824 - BSoc Hunt MC (hrb)
Aaron Ruffner (8) of Huntley celebrates his first goal with Zack Whitaker (16) during the first half of their game against Marian Central Catholic on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Aaron Ruffner (8) of Huntley score his second goal on goalie Jon Paul Franco (24) of Huntley during the first half of their game at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Aaron Ruffner (right, 8) of Huntley celebrates on the bench after his third goal during the first half of their game against Marian Central Catholic on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Jimmy Colvin (14) of Marian Central looks up as Luke Loprieno (11) of Huntley takes the ball upfield during the second half of their game at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Andrew Meyer (21) of Huntley and Sam Guilbeault (9) of Marian Central Catholic fall over each other as they chase a ball during the second half of their game at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Drew Simmons (2) of Marian Central makes a save in front of Aaron Ruffner (8) of Huntley during the second half of their game at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Ryan Janikowski (13) of Huntley and Jacob Klaus (5) of Marian Central Catholic chase a ball during the second half of their game at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Andrew Meyer (21) of Huntley, Johnny Galason (22) and Connor Stiscak (17) of Marian Central jump for a header during the second half of their game at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Sam Guilbeault (9) of Marian Central scores a goal on a penally kick during the second half of their game against Huntley at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald
Sam Guilbeault (9) of Marian Central Catholic celebrates his goal during the second half of their game against Huntley at Marian Central Catholic High School on Wednesday, August 24, 2016 in Woodstock, Ill. The Red Raiders defeated the Hurricanes 4-1. John Konstantaras photo for the Northwest Herald